OTU ESI ESI WỤNYE NGWA NGWA HP LASERJET 1018 - ONYE NBIPUTA - 2019
Otu esi esi wụnye ngwa ngwa HP LaserJet 1018
Maka onye ọ bụla nke oge a, ọ dị mkpa na ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche gbara ya gburugburu. Ndị a bụ akụkọ, akwụkwọ nyocha, akụkọ na ihe ndị ọzọ. Ntọala ahụ ga-adị iche maka onye ọ bụla. Ma, otu ihe na-eme ka ndị a niile dịrị - mkpa maka onye nbipute.
Ịwụnye mpịakọta HP LaserJet 1018
Ndị ahụ na-enwebeghị ọrụ ọ bụla na-eji kọmputa eme ihe, na ndị nwere ahụmahụ ndị nwere, dịka ọmụmaatụ, enweghị onye ọkwọ ụgbọala diski, nwere ike ihu nsogbu yiri ya. Ka o sina dị, usoro maka ịwụnye ihe odide ahụ dị nnọọ mfe, ka anyị chọpụta otú e si eme ya.
Ebe ọ bụ na HP LaserJet 1018 bụ ngwa ngwa dị mfe nke nwere ike ibipụta, nke zuru oke maka onye ọrụ ahụ, anyị agaghị atụle njikọ ọzọ. Ọ dịghị adị.
Nke mbụ, jikọọ onye nbipute ahụ na netwọk eletriki. Maka nke a, anyị chọrọ ụdọ pụrụ iche, nke a ghaghị ịnye ya na setịpụrụ ngwaọrụ. Ọ dị mfe ịchọpụta, n'ihi na n'otu aka nkwụnye. Enweghi ọtụtụ ebe na nbipute ebe ị nwere ike ijikọ waya dị otú ahụ, ya mere usoro ahụ adịghị mkpa nkọwa zuru ezu.
Ozugbo ngwaọrụ ahụ malitere ọrụ ya, ị nwere ike ịmalite itinye ya na kọmpụta ahụ. Nke a ga-enyere anyị aka na USB USB a pụrụ iche, nke a na-esonye na kit. Okwesiri iburu n'uche ebe a na ejiri eriri na-ejikarita aka na onye nbipute, mana i kwesiri icho anya na USB nke di n'azụ nke komputa.
Ọzọ, ịkwesịrị ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ. N'aka nke aka, usoro ntanetị Windows nwere ike ibudata software ọkọlọtọ na ọdụ data ya na ọbụna mepụta ngwaọrụ ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, ngwanrọ dị otú ahụ sitere n'aka onye na-emepụta ihe dị mma karị, n'ihi na e mepụtara ya kpọmkwem maka onye nbipute ahụ. Ọ bụ ya mere anyị ji tinye diski ma soro ntuziaka. Wizards Wụnye.
Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị nweghị ụdị disk dị na diski, ma ọ dị mkpa ka onye ọkwọ ụgbọala dị mma maka onye nbipute ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ aka na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ maka enyemaka.
Mgbe ihe ndị ahụ dị n'elu, onye nbipute ahụ dị njikere iji rụọ ọrụ ma nwee ike iji ya. Ọ na-anọgide na-aga na menu "Malite"họrọ "Ngwaọrụ na ndị na-ebi akwụkwọ", chọta akara ahụ na mbiet ngwaọrụ arụnyere. Pịa ya na bọtịnụ òké aka ma họrọ "Ngwaọrụ Nhọrọ". Ugbu a, faịlụ niile a ga-eziga ka ha bipụta, ga-adaba n'ime igwe ọhụrụ, dị nnọọ arụnyere.
N'ihi ya, anyị nwere ike ikwu na ntinye nke ụdị ngwaọrụ abụghị ihe dị ogologo. O zuru ezu iji mee ihe niile na usoro ziri ezi ma nwee usoro zuru ezu nke nkọwa dị mkpa.